Archive du 20170318
Trafikana taova Zazalahikely amidy 300 tapitrisa Ar
Nampiahiahy ny mponina efa leom-boan�anana amin�ny firongatry ny asa ratsy ny fihetsik�izy ireo, hoy ny Ben�ny tan�nan� Andranolava Razafimahaleo Barnab� Justin, ka narahi-maso akaiky,
Marc Ravalomanana Lasa any Danemark
Mbola mitana ny lohalaharana i Marc Ravalomanana amin�izao fotoana izao, raha fifandresen-dahatra amin�ny vahiny no resahina. Hentitra sy manana ny foto-kevitra ijoroany, fa tsy mba manaiky lembenana amin�ny tsy rariny.
Lalao Ravalomanana Nihaona tamin�ny AIMF tao Paris
Nivory tao amin'ny biraon'ny AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) tao Parisy ny alakamisy lasa teo ny Sekretera Maharitry ny AIMF sy ny mpiara-miasa aminy ary Ramatoa Lalao Ravalomanana, Ben'ny tan�nan'Antananarivo sy ny mpanolotsainy.
Ny Rado Rafalimanana Nanakiana mafy ny mpitondra
Feno ihany ny fo ! Ny tenako indray no nomen�ny �Foundation Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makthoum Humanitarian & Charity� fankasitrahana noho ny fitsonjovana ny Malagasy, kanefa izy ireo no nanolotra sy mbola hanohana ireo antso ataontsika, hoy i Ny Rado Rafalimanana tao amin�ny tambajotram-pifandraisana �facebook� omaly.
Kaominina Ambohijanaka Tsy nesorina izany ny Ben'ny tan�na
Tsy marina ny feo niely tamin�iny herinandro iny fa naato tamin�ny asany vonjimaika ny Ben�ny tan�nan�ny kaominina Ambohijanaka Andriamatoa Alain Ratsimbazafy.
Taratasin�i Jean Ny tsiny !
Miarahaba e ! Ny malaza izao dia ny tsy fandriampahalemana vokatry ny loza voajanahary sy ny voatr�olombelona. Miakatra ny vidin�ny zavatra ilaina andavanadro nefa mihamaro ny tsy an�asa sy ny tsy mihinan-kanina intsony. Mihamaro ny tontakely ka hatramin�ny dokotra nangalarina avy no mampidi-doza ! Efa sahy ka mivarotra olona koa izao ny malagasy hakana taova.
Fanampiana ny traboina Atao fitaovana politika indray ?
Mahagaga sy mahatalanjona ny fihetsiky ny fanjakana Malagasy amin�izao fiatrehana ny voina, ka hisian�ny fanampiana ho an�ireo Malagasy traboina izao. Misy ny lamina amin�ny fizarana ireny fanomezana sy fanampiana na ara-bola na ara-pitaovana ireny, saingy misy tsy mazava.
Fitohasina sy Trano Koltoraly Malagasy Hanao taom-baovao eny Mahamasina
Raikitra fa ny datin�ny 27 sy ny 28 martsa ho avy izao no hankalaza ny taom-baovao Malagasy ny Fitohasina sy ny trano koltoraly Malagasy.
Federasion�ny Baolina kitra Malagasy Mandeha ny feo amin�izay mety handimby an�i Ahamad
Na tsy nisy nanambara ofisialy ny mahamety ho kandid� azy hanolo ny toeran�ny filoha Ahmad izay lasa mpitantana ny CAF eo amin�ny fitantanana ny Federasiona Malagasy ny Baolina Kitra aza ireo olona manodidina azy dia efa mandeha any ho any anaran-dRabekoto Raoul, Randriamiasasoa Doda
Marina fa hoe mila fanampiana isika fa na izany aza mba tokony hanana ny maha izy azy ihany kosa e ! Izay karazam-bazaha rehetra izao ve dia hibaiko antsika eto daholo na ny fomba fiasa na ny fiteny �dia hiova avokoa.
Fanajana ny lal�na mifehy ny fifamoivoizana Nihemotra ny kalitaon�ny fitaterana teto an-drenivohitra
Nisy fihemorana ny fanajan�ny ankamaroan�ireo mpitatitra teto an-drenivohitra ny lal�na mifehy ny fifamoivoizana.
FONDATION ORANGE Nanampy ireo dokotera miasatena any ambanivohitra
Mbola betsaka ireo reny sy zaza maty eo am-piterahana eto amintsika. Anisan�ny tanjon�ny minisiteran�ny fahasalamam-bahoaka ny hampihenana izany araka izay tratra ka eo anelanelan�ny 300 ka
Tahirim-bola iraisam-pirenena Manara-maso akaiky ny fitondram-panjakana
Delegasionina mafonja momba ny resa-bola no nihaona tamin�ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier teny Mahazoarivo omaly zoma 17 martsa,
Ambodivoanjo Ivandry Lasa toerana malaza ahitana tranombarotra goavam-be
Lasa toerana malaza ahitana tranombarotra goavam-be ankehitriny ny eny Ambodivoanjo Ivandry.